LIIFTA PAVLOVSKY EE GURIGA: DARYEELKA, HABABKA DHALMO, CUDURADA IYO CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Sifooyinka koritaanka iyo daryeellaha liinta Pavlovsky ee guriga
Lemon - mid ka mid ah liinta ugu caansan uguna jecel geedaha ku yaal dhaqanka guriga. Naqshadda dhirtaas waxay ka muuqatay waddankeena xilligii Peter ee Great.
Xilligan, waxay u adeegtaa sida qurxinta cajiibka ah ee gudaha gudaha guryaha magaalooyinka. Ka mid ah noocyada kala duwan, meel gaar ah iska leh liin Pavlovsky.
Qarnigii 19aad ee magaalada yar ee Pavlov, oo ku taal Oka River, waxaa ku noolaa ganacsade Karachistov I.S. Ganacsaduhu waa muhiim. Marar badan ayuu ku safray adduunka oo wuxuu soo jiitay waxyaabo kala duwan oo dhulkiisa ah. Markii uu dhirtii dhirta laga keenay Turkiga.
Waxay isla markiiba ku dhacday jacayl dadka degan magaalada waxaana qaar badani rabeen inay koraan liinta Pavlovsky ee guriga. Dhaqanka for liinta ayaa bilaabay inuu koro. Seddexaad, xitaa shirkad ayaa ka muuqatay magaalada, halkaas oo ay ku barteen waxyaabaha gaarka ah ee liinta Pavlovsky.
Liinta Pavlovsky ayaa leh sifooyinka shakhsi ahaaneed iyo tayadasi loo kala saaro miraha kale ee liinta.
Jid geedeedka, oo gaaraya 0.9-1.5 mitir dhererka. Taajirku waa caleen, wareeg, oo leh dhexroor ah 1-1.2 mitir, oo leh 3-4 laamood oo midab leh oo midab leh oo midab leh. Caleemaha Young leh jilif cagaaran madow. On the laamood ee la arki karo dillaacyo dheer iyo spines fiiq dheer.
Caleemaha waa weyn (13 cm), calaamad u ah, oo leh saldhig wedge-qaabeeya. Foomku wuxuu u kala duwanaan karaa si ballaadhan oo qotodheer. Caleemaha waa dhalaalid, dhalaalaya, cagaaran. Iskudar dheh.
Ubax waa bisexual, ballaaran, waxaa loo abuuray si khaas ah in inflorescences ama axils caleen of 2-3 gogo '. Wakhtiga ubaxu wuxuu dhacaa guga hore ama dayrta.
Tied ilaa saddexaad, sannadka afaraad ee nolosha. Waxyaabaha ugu horreeya waa wax yar. Warshad qaangaar ah (15 ilaa 20 sano jir) waxay dhali kartaa miro badan.
Miraha bislaadaan 30-35 maalmood, oo dhamaada koritaanka 9-10 bilood ka dib marka ubax. Iyadoo la'aanta iftiin, geeddi-socodkaas ayaa dib loo dhigayaa illaa 1 sano.
Miraha waxaa lagu sameeyaa 5-10 gogo 'geedka. Lemons waa huruud ah, casiir leh, marar badan oo aan laga helin, foomka parthenocarpic.
Beeraha ubaxa waxaa lagula talinayaa inay goosataan wakhtiga, sida miro badani ay bilaabaan inay lumiyaan dhadhanka iyo tayada qurxinta.
Pavlovsky kala duwan liin: sawir geed iyo miraha.
Next, waxaan ka hadli doonaa ku saabsan Pavlovsky Lemon: daryeelka guriga, dhalmo iyo jirro.
Koritaanka geed maaha mid adag. Wixii kobcin wanaagsan iyo horumar waxay raacaan nidaamka daryeelka fudud.
Ka dib iibsashada
Daryeelka saxda ah ee geedka wuxuu ku bilaabmaa xubin ku-tallaalidkaas oo la sameeyo isla markiiba ka dib iibsashada. Weelka iyo substrate ee geedka ku yaal dukaanka ma aha mid ku habboon dayactir joogto ah.
Iibso weel wax ku ool ah oo horey u sii diyaariso substrate.
Dhirta jecel yahay qolka iftiinka leh. Iyada oo ay yaraanta ay hoos u dhigi kartaa koritaanka, daaqsinta miraha. Laakiin, liin lemon uma dulqaadanayo qorraxda tooska ah.
Maalmaha xagaaga, ha ka tegin dheriga daaqadaha furan. Samee xaalado nalalka iftiinka.
Xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha, maalmaha badiyaa waa la daboolaa. Isticmaal ilaha iftiinka ee dheeraad ah
Guga iyo xagaaga ku hay heerkul diirran ama dhexdhexaad ah - 19-23 digrii. Xilliga jiilaalka waxaa la yareeyay 15-16 digrii.
Lemon ma jecla qorshaha, isbedel deg-deg ah oo heerkulka.
Xilliga xagaaga, cimilada wanaagsan, waxaad ku qaadan kartaa banaanka qoraxda qorraxda iyo helida hawo cusub.
Nadiifi ciidda waxay u baahan yihiin si joogta ah. Xilliga xagaaga, 2-3 jeer toddobaadkii, xilliga qaboobaha waa ku filan hal mar.
Waraabka, waraabinta biyaha heerkulka qolka, degto 20-24 saacadood. Daadinta biyaha qabow lama isticmaali karo.
Haddii xilliga jiilaalka aad warshad ku haysato qol diiran, waxaad u baahan tahay inaad biyo ku cabto biyo kulul. Nidaamka asaasiga ahi wuxuu u baahan yahay qaab isku mid ah sida qaybta kor ku xusan, haddii kale biyaha laga helo xididada caleemaha ayaa dib loo dhigayaa. Iyada oo ay sabab u tahay qoyaan aan habooneyn ee ciidda, liinta waxay bilaabi doontaa inay hoos u dhigto caleenta iyo joojinta fruiting.
La soco xaaladda hoose ee substrate. Iska ilaali biyo dillaacsan oo kicin kara kalluunka roota.
Ku hay gudaha guriga qoyaan ku dhawaad ​​60-65%. Xilliga xagaaga inta badan buufin ku baxaa biyo.
Waa inaad guga iyo dayrta hore. Daryeelka joogtada ah ee joogtada ah ayaa socon kara muddo sannad ah. U fiirso habka saxda ah ee waraabka iyo qoyaanka substrateka.
Ku haboon liinta iftiin, carrada bacrin ah oo leh sahay wanaagsan ee walxaha dabiiciga ah iyo macdanta. Waa inay noqotaa dabacsanaan, gudbiso qoyaanka iyo oksijiinka.
Bacriminta waxay bilaabaan inay sameeyaan muddo 3 sano ah ka dib markaad degto. Dhirta yaryar uma baahna.
Sida bacriminta ku haboon bacriminta organic diyaar u ah.
Waxaad naftaada ka karsan kartaa faleebada ukunta ukunta. Waa kicin wanaagsan oo lagu miiro. Si loo hagaajiyo kobcitaanka, waxaad isticmaali kartaa xalka amooniyam amooniyam oo ah 25-30 garaam halkii litir oo biyo ah. Mararka qaar waxaad bacrimin kartaa faleebo geedka geedo faras.
Dhirta yaryar waxaa lagu beeraa hal mar sannadkii., dadka waaweyn marka loo baahdo.
Geedka waxaa si taxadar leh looga saaraa taangiga, isaga oo ruxaya xididada substrate jir.
Caleemaha dillaacsan, waxyeello leh, waa in la saaro.
Ka dibna dheecaan ayaa lagu shubay hoose ee taangiga, substrate cusub ayaa lagu beeray, warshaduna waa la beeray, waxoogaa yareynaya dusha sare ee dhulka. Haddii ciidda hore ay ku jirto xaalad wanaagsan, waxaa lagu beddeli karaa habka ku-meel-gaadhka.
Beeray carrada qoyan.
Guriga, geedku waa la faafiyaa abuur ama xoqin. Hababka labaduba waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda.
Geedaha koray laga bilaabo abuurka ayaa leh difaac xasilloon, oo si fiican u koraan, midhey u wanaagsanaa. Xaaladdan, dhirta ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay waalidka ee sifooyinka nafleyda. Fruiting wuxuu bilaabmaa oo keliya 8-10 sano.
Marka lakin, liin waxay lihi doontaa 100% la mid ah waalidka. Geedku si dhakhso ah ayuu u geli karaa fruiting - ilaa 2-3 sano nolosha. Isla mar ahaantaana waxay u nugul tahay khaladaadka daryeelka, waxay u nugul yihiin cudurada.
Beerto waxaa la sameeyaa dabayaaqadii guga iyo xagaaga.
Seeds waxaa laga soo saaraa liin, kuwa ugu weyn oo habboon qaababka loo xushay. Waxaa fiican in la diyaariyo miraha yar ee laga qaado miraha kala duwan.
Beerto, waxaad qaadan kartaa sanduuq alwaax ah ama dheriyo yar. Isku dar ah oo ka kooban peat iyo ubaxa ubaxa waxay ku habboon yihiin sida substrate. Qeybta hoose ee taangiga waa in la dhigaa dheecaan.
Seeds sii qoto dheer ee substrate by ku saabsan 1 sentimitir, qoyan leh sprayer.
Geedo waxaa lagu hayaa qol diiran oo si fiican u iftiimay, si joogto ah u qoyaan ciidda, ka ilaali dhibcaha heerkulka iyo qoraalada. Caleemaha ugu horreeya waxay muuqan doonaan 10-14 maalin.
Horumarka wanaagsan, waxaa habboon in la abuuro xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Sprout ku daboolay weel quraarad ah, iyo waraabinta laga sameeyo digsiga. Maalin maalintiiba, dhalada ayaa laga saaraa si ay geedka hawada u oggolaato una neefsato.
Muraayadda ayaa la saaraa marka caleemaha kowaad ay muuqdaan. Waqtigaan, waxaad ku shubi kartaa dhalada weel gaar ah oo loogu talagalay beerista sii kordheysa.
Si loo dhammaystiro, goynta (10-13 cm) ayaa laga jarayaa koritaanka caafimaad qabta xilliga gu'ga hore. Gooyo waa in lagu sameeyaa mindi xagal adag. On gacanka waa inuu ahaado ugu yaraan 4-5 caleemo.
Marka hore, labada caleemood ee hoose ayaa laga soo jarayaa jarista. Inta soo hartay waa la tagi karaa ama waa la dhimayaa.
Ka hor intaan la beeri, gooynta waxaa loo rogi karaa xalka koritaanka kaasoo la diyaariyey 25 mg oo ah indolil butyric acid iyo 0.1 g of heteroozin (marka loo eego hal litir oo biyo ah).
Haddii kiciye kobcin aan loo isticmaalin, gooyaa waxaa lagu shaqeeyaa dhuxul la jajabiyey ka hor inta aan la beeri.
Gacanka waxaa lagu dhejiyaa weel xagal quman. Qeybta hoose ee dheriga dhoobada ah iyo dhulka caleen. Masalan waa inuu ka kooban yahay ciid ama isku dar ah sphagnum iyo ciid.
Waxaa lagu koray xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, daboolay awood. 2-3 toddobaad kadib waxay qaadan doonaan xidid.
Ka dibna waxaa jira fiidiyowyo ku saabsan liinta Pavlovsky: daryeelka guriga, manjooyin, taranta iyo wax kale.
Oo hal video dheeraad ah oo ku saabsan liinta Pavlov: daryeelka ee guriga.
Daryeel aan haboonayn waxay keeni kartaa dhibaatooyin sii kordhaya.
Badanaa, liin ayaa saameeya aphid, caarada caarada iyo qolof. Cabbir fiican oo ka hortag ah waxay noqon kartaa germanyum indoor oo fudud, kaas oo lagu dhajiyo xiga geedka. Wareegtadu waxay cayayaanka u tahay cayayaanka, waxayna ilaalisaa dhirta.
Waxaad ka takhalusi kartaa cayayaanka adoo ku buufinaya xal of diirka basasha ama casaan gaduud cas.
Bacriminta xad dhaafka ah ee ciidda waxay u horseedi kartaa homose. Qaybta hoose ee kiliyaha wuxuu bilaabaa inuu dhinto, caleemaha hoos u dhaco, iyo dildilaaca foomka. Si aad wax uga qabato dhibaatadan waxay caawineysaa daaweynta Bordeaux ama isku dhafka copper.
Waraabinta xad dhaafka ah waxay keentaa in la sameeyo kallana root. Cudurku waa mid cakiran. Haddii geedka aan la beddelin wakhtigeeda, way dhiman kartaa. Inta lagu jiro isu tallaalida, xididdada si fiican ayaa loo dhaqaa biyo socda, qaybaha waxyeellada ah ayaa la saaraa laguna daaweeyaa xal of kaneecada.
Koraaya noocyada Pavlovsky ma aha mid adag, inkastoo nidaamkan waxay u baahan tahay masuuliyad, dareen iyo raacitaan adag oo ku saabsan talooyinka daryeelka geedka. Laakiin, natiijada foosha waa u qalantaa.
Lemon wuxuu noqon doonaa quruxda dhabta ah ee aqalkaaga, waxay ku farxi doonaan tayada qurxinta iyo fruiting wax badan.